निर्वाचित नेतृत्व व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जन्माउँदै, के सैनिक शासन आउनै लागेको हो ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
निर्वाचित नेतृत्व व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जन्माउँदै, के सैनिक शासन आउनै लागेको हो ?
२०७७ आश्विन १३, मंगलवार १३:१२:००
अचेल हरेक दिनजसो सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षबीच हरेक दिन भेट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा चिया खान्छन् । दिनभर बस्छन् । साँझ बैठक निष्कर्षविहीन भन्दै उठ्छन् । सोमबारको बैठक पनि त्यसैगरी सकियो ।
बैठकमा कुनै राष्ट्रिय समस्या या जनताको व्यथाले ठाउँ पाएको छैन । सारा देशको समस्या नै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अहंको व्यवस्थापन भएको छ ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा दाहाल पक्षका ७ मन्त्री छन् । उनलाई १० वटा चाहिएको छ । उनका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर १० पुर्याउनुपर्नेमा जोडबल चलिरहेको छ ।
संविधानले अधिकतम २५ मन्त्रीभन्दा बढी बनाउन नमिल्ने बनाइएको छ । विगतमा शेरबहादुर देउवाले ६४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दर्जन जति त बिनाविभगीय नै थिए । अहिले फेरि त्यही रोग दोहोर्याइँदै छ ।
एकजना जनताबाट पराजित नेता वामदेव गौतमका लागि संविधान संशोधन गर्न तम्सिने नेकपा नेताहरु मन्त्री बढाउन र मन्त्रालय फुटाउन पनि पछि पर्लान् भन्ने छैन ।
आज सत्ता र विपक्षमा रहेका जोकोही नेताले जसरी हुन्छ, यो व्यवस्थालाई थप बदनाम र घृणा जन्माउने काम गरिरहेका छन् । जसरी हिजो २०४८ सालयता लगातार बहुदलीय व्यवस्थाको साख गिराइयो, अहिले त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साख गिराइँदै छ । यो नियोजित हो या नजानीकनै गरिएको हो, रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला ।
तर यही रफ्तारमा व्यवस्थालाई बदनाम बनाउँदै जाने हो भने अब यसको अन्त्य धेरै टाढा छैन । जुन रफ्तारमा यो व्यवस्था ल्याइएको थियो, त्योभन्दा चाँडो पतन गराइँदै छ । जनता भोकले थाल खाऊँ कि भात खाऊँ भन्ने अवस्थामा छन् । तर एकाध नेताकारु मन्त्री बन्ने रहरले राज्यकोषमा अनावश्यक भार पारिँदै छ ।
भएका संरचनाले काम गरेका छैनन्, नयाँनयाँ थपिँदै छ । भएका कर्मचारीले काम पाएका छैनन्, थप दरबन्दी सिर्जना गरी करारमा भर्ती गरिँदै छ । संवैधानिक आयोगहरुमा कार्यकर्ताको लस्कर लगाइँदै छ । अदालतमा अनावश्यक जनशक्ति थोपरिँदै छ । अब काम चाहियो भन्दै न्यायाधीशहरुको जुलुस निस्किन मात्र बाँकी छ ।
ज्याला मजदुरी गर्नेहरु काम नपाएर भोकै पर्ने अवस्था आएकाले हप्तौँ हिँडेर घर पुगिरहेका बेला नेताहरु हेलिकप्टरमा देशाटन गर्छन् । जनता गरीब भएकाले आफूलाई सुहाउँदैन भनेर राजामहाराजाले समेत प्रयोग गर्न नसकेका घडी, चस्मा, जुत्ता, कपडा र गाडी अहिलेका सर्वहाराको नारा दिएर आएका नेताहरु कुनै संकोच नमानी सजिलै प्रयोग गर्छन् ।
खुल्लमखुल्ला राज्यकोषमाथि धावा बोल्नु यिनले बहादुरी ठान्छन् । कुनै घोटालाका निम्ति अब मध्यस्थ नचाहिने भइसक्यो । आफै अघि सर्छन् । राज्यकोषमा यिनको हात पुगेयता रातारात नयाँनयाँ व्यापारिक घराना जन्मिएका छन् । र, तिनको व्यवसाय वृक्ष रातारात फैलिएको छ । केहीको त वासै ती बदनाम व्यापारीको घरमा छ । विदेश जाँदा तिनैले सबै व्यवस्थापन गर्छन् । पखाला लागे पनि विदेशका महँगा अस्पतालमा तिनले उपचार गर्छन् ।
अहिले कोरोना र लकडाउनका कारण धेरैका यस्ता योजना स्थगित भएका छन् । अब खुल्नेबित्तिकै एयरपोर्टमा लर्को लाग्नेछ, सरकारी सुविधाभोगीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पर्यटनका निम्ति ।
यता सरकारी संयन्त्र पूरै पंगु सावित भइसक्यो । बाटाका खाल्टा पुर्न हरेक प्रधानमन्त्रीले मौसमैपिच्छे निर्देशन दिनुपर्छ तर काम वरको सिन्को पर सर्दैन । दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत नगर्ने निजामती संयन्त्रले राज्यप्रति आमनागरिकको नकारात्मक धारणा निर्माण गरिरहेको छ । निजामती कर्मचारी जति भ्रष्ट, व्यापारी जति ठग अनि नेताहरु यी सबैका संरक्षकजस्तो छाप आमनागरिकमा बनेको छ ।
निर्वाचित सरकार र नागरिक प्रशासन पंगु बन्दै जाँदा मुलुकमा सेना भने लोकप्रिय भइरहेको छ । अझ निर्वाचित सरकारको सेनाप्रतिको निर्भरता यसरी बढेको छ कि औषधी र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिदेखि द्रूतमार्ग, सुरुङमार्ग र जलविद्युतसम्बन्धी योजना समेत सेनालाई जिम्मा लगाउँदै छौँ । मेडिकल कलेजदेखि पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट समेत सेनाले नै चलाइरहेको छ । नेपाली सेनाको काम सैन्य कम, गैरसैनिक र व्यापारिक बढी हुँदै छ ।
सेनासँग अब बन्दुक मात्र होइन, आर्थिक स्रोत समेत निकै ठूलो भइसकेको छ । कुनैबेला निर्वाचित सरकारले छुट्याएर दिएको केही अर्ब रुपैयाँको बजेटमा मात्र भर पर्नुपर्ने सेना अहिले आफै समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ । यसैका बलमा उसले राजनीतिक नेताहरुलाई समेत प्रभावमा पार्न कुनै कठिनाइ छैन ।
राजनीतिक दल र नेताहरु बदनाम र भ्रष्ट भएपछि अन्ततः अगाडि आउने सेना नै हो । त्यसमाथि हामीकहाँ अरु सबै खालका प्रयोगहरु भइसकेका छन् । निर्दलीय पञ्चायतको प्रयोग भयो । एकदलीय व्यवस्थाको पनि प्रयोग भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासन पनि हेरियो । नेपालीको गरिबी, बेरोजगारी अनि परिवर्तनप्रतिको उत्कट व्यग्रतामा चढेर माओवादीको सशत्र विद्रोह जन्माइयो । शान्ति वार्ता भयो । संविधानसभाबाट संविधान लेखियो । गणतन्त्र आयो । धर्मनिरपेक्षता आयो । संघीयताको प्रयोग पनि भयो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो । अब ढिलोचाँडो सैनिक शासनको प्रयोग मात्र बाँकी छ ।
विगतमा सेनालाई अघि सारेर संकटकाल लगाइयो । अब हुने परिवर्तनमा सेनाले अरु कुनै शक्तिलाई अघि सार्नेछ । त्यो
पनि देखावटीका लागि । नागरिक समाजमा नाम चलेका कोही व्यक्तिलाई अघि सारेर सेनाले कठपुतली सरकार चलाउन सक्छ ।
सेना सोझै बर्दीमा सजिएर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्न समय लाग्ला । जनताको आस्था भएका कुलमान घिसिङ वा यस्तै कोही कृत्रिम व्यक्तिलाई अघि सारी सेनाले शासन चलाउने दिन अब धेरै टाढा देखिन्न ।
यो दिन चाँडो ल्याउन हालका निर्वाचित नेताहरु सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागिपरेका छन् । नेताहरुका यी गतिविधिबाट आजित जनता पनि एउटा उपकारी तानाशाहको खोजीमा छन् । जनस्तरबाटै बेलाबेलामा यस खालका धारणा सार्वजनिक पनि हुने गरेका छन् । कतिपय बौद्धिक तप्काबाटै पनि यस खासका अभिलाषा व्यक्त भएका पाइन्छन् ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेताहरुका यी प्रयास र जनताको यस्तो अपेक्षामा शुभकामना दिन सकिन्न । तर, सत्य के पनि हो भने समयको गतिलाई रोक्न पनि त सकिन्न ।